အကျင့်စရိုက်ခန့်မှန်းချက် – Myanmar Live
လူနေမှုပုံစံ / အကျင့်စရိုက်ခန့်မှန်းချက်
Favorite Flowers Favorite Loves သူနှစ်သက်တဲ့ပန်းဟာသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုဖော်ပြတယ်
September 4, 2019 September 4, 2019 - by arnakorn saengsiritrakun
သင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကိုအလွယ်တကူချည်းကပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုသူကြိုက်တတ်တဲ့ပန်းအမျိုးအစားကတဆင့်ခန့်မှန်းနိုင်မယ့်နည်းနဲ့ ချည်းကပ်ပုံ ချည်းကပ်နည်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ၁။ နှင်းဆီပန်း : သူဟာအလှအပကြိုတတ်သူ အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို လိုချင်သူ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ် …
တစ်ပါးသူသင့်အားစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသိနိုင်မယ့် အကဲခတ်နည်း ၆ ချက်
August 21, 2019 August 21, 2019 - by arnakorn saengsiritrakun
မိုးရာသီဟာလူလွတ်သူငယ်ချင်းတွေကို အထီးကျန်စေတယ်မဟုတ်လား ? ဘယ်အရပ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အတွဲကိုယ်စီနဲ့ ထီးလေး တွေအတူဆောင်း လက်အတူတွဲပြီးသွားနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ ဒါပေမယ့်နောက်ဆိုလုံးဝအထီးမကျန်စေရတော့ ပါဘူး ဒီနေ့ဘယ်သူကိုယ့်ကိုကြိတ်ကြွေနေလည်းဆိုတဲ့ …
အချစ်ရေးခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ ၆ မျိုး
August 15, 2019 August 15, 2019 - by arnakorn saengsiritrakun
၁. ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးပိုင်ဆိုင်သူဟာစီးစိမ်ဥစာကြွယ်ဝသူ နဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်ကိန်းရှိပါတယ် သင့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ဟာ အရာရာအားလုံးပြည့်စုံပြီး သင်တို့ရဲ့အချစ်ဟာလည်းဖြောင့်ဖြူးပြီး စိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါလိမ့် မယ်။ ၂. အချစ်စစ်ကိုတွေ့မယ့်လက္ခဏာ …
သင့်အနာဂတ်ချစ်ခြင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကာပေါ်လွင်စေမည့် အမှတ်အသား5ခု
November 28, 2018 - by Mynamar Live
ဥစ္စာဓနများအပြင် အချစ်သည်လည်း တွေးဆ၍မရနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ပြီးပြည့်စုံရမည်ဟု …
သူများထက်ပိုမှန်ကန်တိကျ! သင်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု ဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ဓါတ်ကြီးလေးပါးမှ အကျင့်စရိုက်ကိုခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်
November 23, 2018 - by Mynamar Live
ကျွန်ုပ်တို့လူတွေဟာ အရာတခုခုကိုလုပ်ပြီး အောင်မြင်ပြီးဆုံးသည်အထိ လုပ်ဆောင်ရာမှာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုခြင်းက ကွာခြားကြပါတယ် …
သင့်ချစ်သူဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ သင်အကြိုက်ဆုံး ရေခဲမုန့်အရသာမှ အကျင့်စရိုက်ကို ခန့်မှန်းခြင်း
November 16, 2018 - by Mynamar Live
vanilla အရသာ ရေခဲမုန့် သင့်ချစ်သူဟာ မိမိစိတ်အကြိုက်ကို …